Sandals Resorts Rucheno uye Kuchengetedza ndizvo Zvakakosha # 1
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Resorts Rucheno uye Kuchengetedza ndizvo Zvakakosha # 1
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Culinary • tsika nemagariro • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • Nhau Dzakanaka • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Resorts • Kutarisirwa • Vanodanana Michato Honeymoons • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
“KuSandals Resorts, utsanana nekuchengeteka zvagara zviri pekutanga # 1. Vashanyi vedu vakavimbika uye nhengo dzechikwata dzinoshamisa chikamu chemhuri yeSandals, uye isu tinochengeta mhuri yedu. Hutano hwavo nekuchengeteka ndicho chinhu chedu chinotarisa. ” akadaro Gordon "Butch" Stewart, Muvambi uye Sachigaro weSandals Resorts, vachitaura pamusoro pemaitiro akaitwa neSandals kubvira pakaitika COVID-19 coronavirus denda.
Kwemakore anoda kusvika makumi mana, maSandals Resorts anga achingoramba achishandisa nekusimbisa maprotocol ehutano nekuchengetedza kuona kuti vashanyi vanokwanisa kunakidzwa nezororo ravo reCaribbean vasina kunetseka. Mukugadzirira kugamuchira vaenzi kudzoka kune runako uye kudziya kweCaribbean, kambani nhasi yaunza Sandals Platinum Protocols yeUtsanana, ichivaka pane yayo iripo indasitiri-inotungamira maitiro ekuvimbisa hutsanana zviyero uye yakawedzera hutano uye chengetedzo matanho ayo anotarisana nekuchinja kwevatengi tarisiro pakati pe COVID -40.
“Tinoda kuti vaenzi vedu vasatombonetseka nezvechimwe chinhu kuti vagonakidzwa neLuxury Included® zororo ravakavimba naro nguva nenguva. Tiri kuita zvese zvatinogona kupa runyararo rwepfungwa panguva yanga yakanetsa pasi rose, ndosaka takaenderera mberi nekushandura zvirongwa zvedu kuti tigare zvakanaka, ”Butch akawedzera.
Sandals Platinamu Maprotocol eUtsanana anosanganisira akati wandei-ekutanga-utsanana matanho anochengetedza rwendo rwevaenzi kubva pakusvika kusvika pakuenda, kusanganisira zvimwe zvehutano uye kugara zvakanaka zvinodiwa munzvimbo dzese dzekubata panzvimbo yekutandarira. Zvitsva uye zvakagadziridzwa zvimisikidzo zvinozoitika kune gumi nemashanu eSandals Resorts uye matatu maBeach Resorts anosanganisira:
Zvese-Zvinosanganisira gumi nemasere Ekubata Poindi Dzidzira
Sandals Resorts yapedza kunyatsoongorora kwese kwese kwese kwekutaurirana kwevaenzi, zvichikonzera kubatanidzwa kwetsika dzepamberi dzehutsanana pamatanhatu gumi nemasere ekubata - kutanga kubva panguva iyo vashanyi vanosvika kumahombekombe eairport kuburikidza neruzivo rwese rwechiitiko. Aya ekubata mapoinzi anosanganisira iyo airport lounge; muenzi anoendesa uye kubva kunzvimbo yekutandarira; dzimba dzevaeni, chikafu uye chinwiwa zviitiko; kuchenesa dzimba uye kuwacha; elite services inosanganisira wevashandi uye yeClub Sandals Concierge; kugadzirisa; nzvimbo dzekushanyira dzakadai semitambo yemvura; erevheta; madziva ekushambira, jacuzzis uye spas; nhengo dzeboka dzinowana mapoinzi; nzvimbo dzekusimbisa muviri uye iyo Red Lane Spa; dzimba dzekugezera dzeveruzhinji; vanotengesa uye kugamuchira; nzvimbo dzeruzhinji dzese dzinosanganisira dzinotorera vanhu nemabhishi; kumashure kwezvivakwa zveimba zvakaita semakamuri ezvitoro nemahofisi; Vana Makambi uye mapaki emvura kuBeach Resorts; uye HVAC masisitimu.
Enhanced Triple-Tarisa Sisitimu yeKuchenesa uye Hutsanana
Zvese nzvimbo dzekuchengetera zvinoshambidzwa nekushambidzwa nekushambidzwa nguva dzese, neTriple-Tarisa system uye hushoma hwekuongorora katatu zuva nezuva. Kuongorora uku kunosanganisira nzvimbo dzese dzakaomarara - kubva pamaburi emusuwo uye mukati memotokari dzinoshandiswa kuchinjisa nendege; dzimba dzekudyira dzeveruzhinji, dzinoongororwa, dzakacheneswa uye dzakashambidzwa mukati memaminitsi makumi maviri; makicheni, mabhawa uye maresitorendi, kusanganisira mamamenyu, matafura, zvekucheka, magirazi, zvigaro nezvimwe; uye madziva ekushambira uye matopu anopisa. Dzimwe nzvimbo dzekuchenesa maoko dzinozopihwa vashanyi uye nhengo dzechikwata munzvimbo dzese dzekugara, munzvimbo dzese dzekudyira uye mukati memumwe neumwe imba yevaeni. Chero zvinhu izvo vashanyi vachasangana nazvo - kubva kumakamuri emakamuri kuti vagamuchire cocktaileti magirazi - anogezwa asati agovaniswa.
Itsva Certified Sandals Yakachenesa Rooms Rooms
Shangu dzinounza matanho akasimba ekuchengeta dzimba sechikamu cheSandals Platinum Protocols yeUtsanana, kusanganisira: kuunzwa kweanowedzera mamwe anoshanda muzvipatara; magetsi aerosol sprayers ekuchenesa kwepamberi; kushandiswa kwe UV-LED mwenje michina kuongorora hutsanana; air duct sanitization yekusvika kwega kwega uye pakufamba kwega kwega; vhiki nevhiki-kuchenesa steam uye kuchenesa carpeting; kuiswa kwema-anti-bacterial gels uye sipo mune yega yega imba yevaeni; uye kunyatsoomerera kuTatu-Tarisa Sisitimu.
Pamba-Imba Ku-Mukamuri Kuongorora-mukati, kutanga muna Chikumi
Vaenzi vanove nekwaniso yekutarisa-mukati online, vachivabvumira kutsika tafura yepamberi uye kuenda akananga kukamuri ravo. Imba yekuzorodza yekuzorodza, yega inorwisa mabhakitiriya ruoko tauro uye munhu ari-mukamuri ruoko sanitizer anogara akamirira vanosvika vaenzi.
Maitiro Ekuparadzanisa Nharaunda
Shangu dziri kuunza nzira nyowani dzekukurudzira vashanyi kuti vachengetedze nharaunda yakachengeteka pavanenge vachitsigira ruzivo rwakasununguka iro zita rinozivikanwa, kusanganisira: kuwedzera kuwedzerwa kwendege nevashanyi vashoma pamotokari; kuwedzera nguva dzekutarisa pakati pevashanyi; kumisikidza yakachengeteka nzanga nzendo kupfuura maresitorendi, mabara uye mahombekombe; kutsiva kukwazisana nekugutsurira musoro uye kunyemwerera; uye kudzora marifiti mafambiro kune vaviri vaviri parwendo kuSandals Resorts uye imwe mhuri parwendo kuBeaches Resorts, nevashandi vacho vachitora dzimwe nzira.
Chikwata Nhengo Dzidziso uye Yekudzivirira Yekutonhora Kutarisa
Sandals iri kuverengera nhengo dzese dzechikwata kuti dzigare dzakagwinya mukati nekunze kwenzvimbo yebasa nekuenderera mberi nekudzidziswa kwehunyanzvi pamatanho ekudzivirira anotarisirwa kuzvirongwa zvekudzivirira uye nekuwedzera maitiro ehutsanana. Vashandi vese vanozodiwa kuti vazive panowanikwa zviteshi zvemaoko zvekuchenesa maoko nguva dzese, kupfeka zvinodzivirira kumeso nemagurovhosi nguva dzese pavanenge vari pazororo, uye kuona kuti yunifomu haina kupfekwa pakufamba kuenda nekudzoka kubasa. Nhengo dzese dzechikwata munzvimbo dzinotandarira dzichazotariswa tarisiro yekushisa isati yatanga kusati kwatanga kusuduruka mukuwedzera kubvumidzwa kwekurapa kwakaomarara.
Vese vatengesi, vanotengesa uye vanobatirana vachabatwa kune maSandals Platinum Maprotocol matsva eUtsanana nekudzora mawindo ekuendesa kune rimwe bato panguva, vachidzikamisa kusangana panyama; kuchenesa nzvimbo dzese dzekubata, kusanganisira zvishandiso, nzvimbo dzekuchengetera uye nzvimbo dzekuwana; uye kubvisa zvese zvekunze kurongedza kana wasvika.
Kudzivirira kwekugadzira kwagara kuri chiito chakakosha kuchengetedza hutano hwevashanyi veSandals Resorts, nhengo dzechikwata uye macheni ekupa. Pasi pekutungamira kwevashandi vezvekurapa uye nekugara uchiongorora kuraira uye kurairwa kunopihwa neCenters for Disease Control (CDC), World Health Organisation (WHO) uye maMinistries eHurumende emunyika imwe neimwe maSandals Resorts anodana kumba, yakazvipira Quality Inspection Team, padivi peEnharaunda Hutano neKuchengetedza Mamaneja, inovimbisa kuomerera kwakasimba uye kuita musono kwenzira yepamusoro yekudzivirira kupararira kwezvirwere zvese. Mahotera ese akashongedzerwa nezviteshi zvezvekurapa zvinoshanda zuva nezuva nemukoti akanyoreswa uye 24/7 panhare-vashandi vekurapa.
Pamusoro pezvo, Sandals Resorts yakawana nzvimbo yayo seketani yehotera chete pasi rese kuti ive nenzvimbo dzayo dzese dzakasimbiswa neiyo EarthCheck benchmarking uye certification chirongwa - chakapihwa kumakambani anounza akachena, akachengeteka uye ane nzvimbo dzakanaka kune vafambi vangave vari kushanya, kugara kana kushanda kwairi kuenda - iine mapfumbamwe resorts parizvino akabata Master Certification.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Sandals Platinum Protocol dzeUtsanana, ndapota shanya www.mumusi.com
Sandals Resorts inopa vanhu vaviri murudo zvakanyanya kudanana, Luxury Inosanganisirwa® zororo ruzivo muCaribbean. Iine gumi nematanhatu anoshamisa maratidziro emahombekombe egungwa muJamaica, Antigua, Saint Lucia, Iyo Bahamas, Barbados neGrenada, Sandals Resorts inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe kambani yekutandarira pasi pano. Siginecha Rudo Nest Butler Suites® yeiyo yekupedzisira mune zvakavanzika uye sevhisi; vatengesi vakadzidziswa neGuild of Professional English Butlers; Red Lane Spa®; 15-Nyeredzi Global Gourmet ™ yekudyira, kuve nechokwadi chepamusoro-pasherufu doro, premium waini uye gourmet yakasarudzika maresitorendi; Aqua Nzvimbo nehunyanzvi PADI® chitupa uye kudzidziswa; inokurumidza Wi-Fi kubva kumahombekombe kuenda kuimba yekurara uye Sandals Yakasarudzika Michato ese eSandals Resorts anosarudzika. Sandals Resorts chikamu chemhuri dzine dzimba Sandals Resorts International (SRI), iyo inosanganisira Beaches Resorts uye ndiyo yeCaribbean inotungamira ese-anosanganisira resort kambani. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Sandals Resorts Luxury Inosanganisirwa® mutsauko, shanya www.mumusi.com .
Nenzvimbo nhatu dzinoyevedza muTurks & Caicos neJamaica, Beaches Resorts ndiyo yekupedzisira kupukunyuka kune yega nhengo yemhuri. Beaches Resorts inopa yakawanda yemhando inclusions kupfuura chero imwe nzvimbo yekushambadzira pasi pano ine inokatyamadza mapaki emvura, XBOX® Play Lounge, yakasarudzika yeVana Makambi, vechidiki makirabhu ehusiku, Certified Nannies, Butler sevhisi, Red Lane® Spas, Aqua Centres ine nyanzvi PADI® certification uye kudzidziswa ; uye yemahara Wi-Fi. Sekuzvikudza kwekutsigira Sesame Street, Beaches Resorts inopawo yeCaribbean Adventure neSesame Street®, uko vana vanogona kushandisa zororo ravo neshamwari dzavo dzavanoda kubva kuSesame Street gang nemabasa ezuva nezuva uye masvondo evhiki. Mahombekombe Resorts zvakare inzvimbo yakakwana yemisangano yemhuri kubva kusangana zvakare uye akakosha mazuva ekuzvarwa kune siginecha yekuenda muchato chirongwa, Beaches Customizable Michato. Beaches Resorts chikamu chemhuri dzine dzimba Sandals Resorts International (SRI), iyo inosanganisira Luxury Inosanganisira® Sandals Resorts, uye ndiyo yeCaribbean inotungamira ese-anosanganisira resort kambani. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve iyo Beaches Resorts mutsauko, shanya www.mabhega.com.